ကယားပြည်နယ်တွင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံနှင့် မာဘယ်ကျောက်အလှဆင်ပစ္စည်းစက်ရုံများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကမ်းလှမ်းထားပြီး မြေရရှိမှုအတွက် ကူညီပေးမည် | BETV Business News
ကယားပြည်နယ်တွင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံနှင့် မာဘယ်ကျောက်အလှဆင်ပစ္စည်းစက်ရုံများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကမ်းလှမ်းထားပြီး မြေရရှိမှုအတွက် ကူညီပေးမည်
၎င်းကို နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Myanmar Global Investment Forum-2019 အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်မေမျိုးဇော်က ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်မတို့ ပြည်နယ်မှာ သဘာ၀ တော၊ တောင်၊ ရေ၊ မြေတွေ ပေါများတဲ့အတွက် သဘာဝက ပေးထားတဲ့ ထုံးကျောက်တောင်တွေ ရှိတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ ဆီမှာ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတွေ လာလုပ်လို့ ရပါတယ်” ဟု သူမက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ပြည်နယ်၌ သုံးလို့မကုန်နိုင်သော မာဘယ်ကျောက်တောင်များ ရှိသည့်အတွက် အလှဆင် မာဘယ်ကျောက်ပြားများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဘုရားစင်တုတော်များ၊ ကြွေပန်းအိုးများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် တိုက်တွန်းထားပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိကြောင်း ဒေါ်မေမျိုးဇော်က ရှင်းပြခဲ့သည်။
နိုင်ငံ၏ နေရာအနှံ့အပြားတွင် မြေရရှိမှုအခက်အခဲများရှိသော်လည်း ကယားပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မေမျိုးဇော်က ဖြည့်စွပ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
သူမက “ရေရရှိမှုကလည်း ပူစရာမလိုပါဘူး၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုကလည်း ပူစရာမလိုပါဘူး၊ကျွန်မတို့ ပြည်နယ်အစိုးရကလည်း အားပေးကူညီနေပါတယ်။ မြေအသုံးပြုခွင့်တွေကိုလည်း ကြိုပြီးတင်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ ပြည်နယ်မှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်” ဟု သူမက ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်ထောင်အစိုးရမှတစ်ဆင့် ကြိုတင်ကာ မြေနေရာ လျှောက်ထားပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ကယားပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျသည့် ပြည်နယ်ဖြစ်သော်လည်း ရာသီဥတု သင့်တင့်မျှတပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာသောကြောင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများစသည်တို့တွင် အလားအလားကောင်းများစွာ ရှိနေကြောင်း ဒေါ်မေမျိုးဇော်က Myanmar Global Investment Forum 2019 အခမ်းအနားတွင် တင်ပြခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ် ကျင်းပသည့် အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို Euromoney Conferences စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်မေမျိုးဇော်က ဆက်လက်တင်ပြရာတွင် “ရေရရှိမှုနဲ့ မြေဆီလွှာကောင်းမွန်မှုတို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ လာရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ သင့်တင့်မျှတပါတယ်၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ စပါးထွက်ရှိတာကြောင့် ပြောင်းအခြောက်ခံစက်တွေကိုလည်း လာရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်” ဟု ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုအနေဖြင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ဖြူးနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏ၏ လေးပုံတစ်ပုံသည် ကယားပြည်နယ် လောပိတရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ ရရှိသောကြောင့် ကယားပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာရောက်လုပ်ကိုင်လျှင် လျှပ်စစ်မီး အလုံအလောက် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေါ်မေမျိုးဇော်က ဆွဲဆောင်ထားသည်။
ထို့အပြင် ကယားပြည်နယ်၌ လည်ပတ်စရာ သဘာဝအလှအပနေရာများစွာရှိပြီး လည်ပင်းတွင် ကြေးကွင်းစွပ်သည့်ဓလေ့ဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိသည့် ကယန်းလူမျိုးများရှိခြင်းကြောင့်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အခွင့်အလမ်းများစွာရှိကြောင်း သိရသည်။
Donec vel libero ullamcorper, faucibus augue auctor, imperdiet diam. Duis quis nibh eget urna convallis blandit. Fusce iaculis purus vitae convallis aliquet. Ut auctor nunc sed odio bibendum fringilla. Quisque egestas non magna ac tincidunt. Aenean laoreet commodo nulla, sed ultrices odio vehicula sit amet. Suspendisse erat tellus, porta et facilisis sit amet, adipiscing sed diam. Nulla condimentum arcuapellentesque pretium. Pellentesque pharetra odio eu auctor suscipit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras congue, felis in congue iaculis, elit enim molestie urna, ut accumsan augue magna aliquet nisi. Nullam interdum bibendum magna, eu sagittis metus convallis quis. Pellentesque vehicula purus sit amet tellus pellentesque suscipit. Ut dolor elit, ullamcorper quis ornare vel, congue id orci. In et orci in dolor dapibus sodales ac nec diam. Etiam vulputate erataquam ullamcorper volutpat. Vestibulum vel feugiat sem, non molestie purus. Duis sit amet faucibus ipsum, ac aliquet urna. In hendrerit sit amet dolor vitae semper.